Barlamanka Somalia oo qaraar ka keeney Kenya
MUQDISHU: Kulan mudanayaasha Barlamanka Somalia ku yeesheen magalada Muqdishu gaar ahaan xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay arrimo kala duwan islamarkaana waxaa lagu qaybiyay qaraar ka dhan ah duqaymaha diyaarahada dagaalka Kenya ka wadaan gobolka Gedo Somalia.
Fadhiga Xildhibaanada oo 148 mudane islamarkaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa lagu cambaareeyay weerarka kasocda gobolka Gedo ee lagu waxyeeleeyay dad shacab ah iyo xoolahood, waxayna dowladda Kenya ka codsadeen inay si dhaqso ah u joojiso duqaymaha ay wado.
Barlamanka ayaa sidoo kale 30 bishan dalbaday inuu golaha shacabka horyimaado Ra'isal wasaaraha Somalia Cumar Cabdirashiid Cali Sharmake, si wax looga weydiiyo arrinta Kenya ka wado qaybo kamid ah gobollada Somalia.
Warbixin ay Barlamanka Somalia ka hor akhriyeen guddi loo xilsaaray inay soo baaraan weerarka deegaanka ayaa lagu sheegay in kooxda Shabaab taageero siiyeen beel kamid ah ku dega gobolkaas, taasoo kooxda u sahashay inay dhulka dhigaan saldhiga Milatari ee ciidamada qaybta ka ah AMISOM.
Xaaladda qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa laga soo dayrinayaa, waxaana kasocda barakac xooggan oo ay wadaan shacab xoola dhaqato u badan, kuwaas oo cabsi ka qaba duqamaymaha aan meel dayashada lahayn ee lala eeganayo dadka gobolkaas.
Ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaadey xero ciidamada Kenya kuwaasoo saldhig ku lahaa saldhig degaanka Ceelcad ee ku taal gobolka Gedo halkaasoo ku dileen tiro askar ah.
Kenya oo dishey madaxii sirdoonla Al-Shabaab
Caalamka 18.02.2016. 14:27
NAIROBI- Qoraal kasoo baxey ciidamada dalka Kenya ayaa lagu sheegey in weerar diyaardeed ku dileen madaxii sirdoonka ururka Al Shabaab iyo toban kale oo ka tirsan madaxda ururkaas.
Korneyl David Obonyo, oo ah afhayeen u hadlay ciidmada difaaca Kenya (KDF ...
Maamulka Garbahaarey oo ka hadley weerarada
Puntland 27.01.2016. 12:11
​Kenya: Faahfaahin xannibaadda wafdiga Ra'isal wasaaraha
Soomaliya 21.02.2016. 16:23
​Kenya: Wafdi kasocda dowladda Somalia oo la xannibay
Soomaliya 21.02.2016. 00:08
​Somalia: Buuq hareeyay kulankii Barlamanka
Soomaliya 20.02.2016. 14:00
​Kenya oo dishay madaxii qaraxyada Al-Shabaab
Soomaliya 20.02.2016. 13:25
Madaxweynaha Somalia oo Hortagaya Barlamanka Federaalka
Soomaliya 07.02.2016. 11:42
Ururka Al-shabaab oo la wareegey degmada Marka
Soomaliya 05.02.2016. 16:11